» कृष्ण कंडेल माथि शत्रु लागे ! एकैदिनमा ७ वटा कपिराईट आयो भन्दै भावुक हुँदै आए मिडियामा ! (भिडियो सहित) कृष्ण कंडेल माथि शत्रु लागे ! एकैदिनमा ७ वटा कपिराईट आयो भन्दै भावुक हुँदै आए मिडियामा ! (भिडियो सहित) – हाम्रो खबर
कृष्ण कंडेल माथि शत्रु लागे ! एकैदिनमा ७ वटा कपिराईट आयो भन्दै भावुक हुँदै आए मिडियामा ! (भिडियो सहित)
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ। “काठमाडौ । अभिनेत्री विपना थापा अहिले माइती देश नेपालमा छन् । उनी फिल्मी कार्यक्रमका लागि नेपाल आएकी हुन् । भारतीय नागरिकसंग विवाह गरेपछि उनी उतै ब्यस्त भएकी छन् । तर बेलाबेलामा उनी नेपाल आइरहन्छिन् । उनले, चाडै नै फिल्ममा फर्कने बताएका खबर आइरहेका छन् । उनी दुई वर्ष पछि फेरी नेपाल आएकी हुन् । उनी विवाह गरेर गएको १३ वर्ष भयो । तर बारम्बार नेपाल आइरहने बताउने विपना नेपालको माया निकै लाग्ने बताइन् ।”
“उनले यो विषय सामाजिक सञ्जालमा बोलेर भाइरल भने हुन नखोजेको बताइन् । नायीका विपनाले ऋषी धमलाको प्रश्न सोध्ने शैलीको आलोचना गर्दै भनिन्, पि टौं ला झै गरेर नबोल्नुस् ऋषी जी । एक नेपाली चेली र कलाकार भएका कारण पनि उनले नेपालकै इज्जतका लागि भारतमा आफ्नो घर ब्यवहार धानेर बसेको बताएकी छन् ।
यो पनि,,,गायक छत्र शाही र गायिका काजलको बिहे हुने छत्रकै साथी चौका दाउ गीतका गायक बाबु कृष्ण परियारको खु’लासा ( भिडियो )(भिडियो समाचारको अन्त्यमा राखियको छ कृपया पुरा हेरिदिनुहोला है।)सामाजिक सञ्जालमा दुई महिना देखि कञ्चन र अनिषाको बारेमा निकै चर्चा भएको छ । दुई महिनाको उपचारवाट पनि कञ्चन निको हुन सकेनन् । आइतवार उनको नि`धन भएको छ । लामो समय उपचार गराउँदा पनि उनको स्वास्थ्यमा चाहेजस्तो सुधार आउन सकेको थिएन ।आफुले माया गरेको मानिसलाई पाउन नसक्दा कञ्चनले आफैलाई स जा य दिएका थिए । नेपालको कानुन अनुसार उनीहरुको प्रेम र विवाह गर्ने उमेर भएको थिएन । सानै उमेरमा प्रेममा परेका उनीहरुले विवाह त गरे तर त्यो विवाह लामो समय सम्म टिक्न सकेन ।
चितवनवाट काठमाडौ पुगेर कञ्चनको आमाको अगाडी विवाह गरेको भोलीपल्टै बेहुलीले आफ्नो माइतीको द`वावमा कञ्चनलाई आफुले प्रेम नगरेको बताइदिइन् । उनलाई प्रहरी कार्यालय लगियो । प्रेमिकावाट अलग गराइयो । त्यसपछि उनीहरुको सम्बन्धमा परिवर्तन आयो ।त्यो सबै अवस्थाको सामना कञ्चनले सहन सकेनन् कोठामा फ’र्किएर वि ष खा ए । करिब दुई महिनाको उपचार पछि उनको नि`धन भयो ।आमाले एक्लै हुर्काएको छोरा गु`माउनु परेपछि उनको अवस्था निकै बे`हाल भएको छ । जिवनको एक मात्र सहारा ति आमाले गु`माएकी छन् ।
श्रीमानको सहयोग समेत न’पाएकी कञ्चनको आमाले एकमात्र सहारा रहेका छोरा पनि गु मा उनु परेको हो । छोरा गुमाएपछी कन्चनको मामी एक्लै क्री`या बस्नुभएको छ ।कन्चनले पढाएका विद्यार्थीहरू पनि स_मावेदन तथा श्रद्धान्जली दिन पुगेका थिए।कन्चन सँग बिगत ३ बर्ष पहिले बाट चिनजानका एक अन्कलले यस क्रममा एक मिडियाकर्मी सँग वास्तविक कुरा राखेका छन्।